Blog of Nyein Chan Yar: ဗေဒင် game
စိတ်ပြေ လက်ပျောက်ကလေးပေါ့။ :)
ဒီ ဗေဒင် game လေး ကျွန်တော်ဆီမှာ ရှိနေတာကြာပါပြီ။ ကိုယ်တိုင် စမ်းကြည်တုန်းက မှန်သလို သူငယ်ချင်းတွေ ပေးကြည့်တော့လည်း မှန်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။
ဖြေကြည့်မယ်ဆို စိတ်ဝင်တစား ဖြေပါ။ ရှောက် ရမ်းမရေးပါနဲ့။ တစ်ခါပဲ ဖြေလို့ရပါမယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဖြေ သိပြီးမှ ဆိုရင် နောက်တစ်ခေါက် ဖြေလို့ အဖြေမှန် မထွက်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဖြေတဲ့အခါမှာ စိတ်ထဲမှာ ချက်ချင်း ပေါ်လာတာကို ချရေးပါ။
အရင်ဆုံး ၁ ကနေ ၁၁ အထိ အမှတ်စဉ်ကို အပေါ်အောက် ချရေးထားပါ။
၁ နဲ့ ၂ မှာ - ကြိုက်ရာ ဂဏန်း တစ်ခုစီရေးပါ။
၃ နဲ့ ၇ မှာ - ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် တစ်ဦးစီရဲ့ နာမည်တွေ ရေးပါ။ (ကိုယ်က ယောင်္ကျားလေးဆို မိန်းကလေး နာမည်။)
(၃ မှာ တစ်ယောက် ၇မှာ တစ်ယောက်)
(အများကြီး မစဉ်းစားပဲ ခေါင်းထဲ ပေါ်လာတဲ့ နာမည်တွေကိုသာ ရေးပါရန်။)
၄ ၊၅ နဲ့ ၆ မှာ ကျား/မ မရွေး တစ်ယောက်ယောက်စီရဲ့ နာမည်တွေ ရေးပါ။ (သူငယ်ချင်း ၊ မိသားစုဝင် လိုမျိုး။)
၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁ နေရာတွေမှာ သီချင်း ခေါင်းစဉ် တစ်ခုစီ ရေးပါ။
6.) ဆုတောင်းပါ။ ;)
ကဲ ကိုယ်ဖြေလိုက်တာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ။ ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါ။ good luck :)
Posted by dathana at Friday, September 07, 2007
Anonymous September 08, 2007 7:11 AM
နံပါတ် (၂) နေရာမှာ ၉ လို့ရေးခဲ့ပါတယ်။
Anonymous September 10, 2007 12:30 AM
Mhan dal byar..
Unknown September 11, 2007 6:03 PM
dathana September 12, 2007 12:31 AM
ဒီလူ » sorry for removing ur comment due to spoilers. Thanks for your comment
Yan September 14, 2007 12:36 AM
ဒါလေးကို ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်လည်ဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ.
dathana September 14, 2007 1:45 AM
ရပါတယ်။ link ပေးတာပဲ။ ကောင်းတာပေါ့ :)
မြရွက်ဝေ September 14, 2007 4:26 AM
နံပါတ် (၂) နေရာမှာ (၇)
နှင်းပွင့်ဖြူ September 14, 2007 4:40 AM
မော်စီ September 14, 2007 6:35 AM
kay September 14, 2007 7:07 AM
Moesat September 14, 2007 8:11 AM
Good တယ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေ... နောက်လည်းထပ်လာ ဦးမယ်နော်.
Anonymous September 14, 2007 8:13 AM
တော်တော်များများမှန်တယ်ဗျ.. နံပါတ် ၂ မှာ ၅ ရေးခဲ့ပါကြောင်း... eduking..
thamudayanwe September 14, 2007 8:42 AM
thamudayanwe September 14, 2007 8:44 AM
i wanna also link my blog,can i?
dathana September 14, 2007 9:01 AM
မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ LINK ပေးနိုင်ပါသည် ခင်ဗျား။ :) comment အားလုံးအတွက်လည်း ကျေးဇူး အထူး အထူး အထူး :)
Anonymous September 15, 2007 3:09 AM
ဒီပိုစ့်လေးကို ဘလော့မှာ ပြန်တင်ခွင့်ပေးဖို့ ခွင့်တောင်းချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Anonymous September 15, 2007 5:19 AM
နံပါတ်(၂) နေရာမှာ (၇)လို့ရေးထားပါတယ်။
MgThaJan September 15, 2007 2:46 PM
Layma September 16, 2007 7:15 AM
မှန်လိုက်လေ…နောက်ထပ် (၇)ယောက် ကိုလက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ဦးမယ်…။
Anonymous September 16, 2007 11:43 AM
Sai Sai September 16, 2007 11:50 AM
နံပါတ် ၂ နေရာ မှာ ၁၁ ဗျ
Anonymous September 17, 2007 2:49 PM
Anonymous September 17, 2007 6:03 PM
၂ မှာ ၇ လို့ရေးခဲ့ပါတယ်။ တောက် မှန်တယ်ဗျာ။
Unknown September 18, 2007 3:52 AM
Nwai Hninn September 18, 2007 1:37 PM
တကယ်ကြီးမှန်တာပဲ.. ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်.. ကျေးဇူးပါပဲ.. ဒီပို့စ်ကို တစ်ဆင့်လင့်ခ်ပေးတဲ့ မမွန်းသက်ပန်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. နံပတ်၂ နေရာမှာ ၂ လို့ရေးခဲ့ပါတယ်..
Anonymous October 01, 2007 3:28 AM
7 rSm rdef;r emrnf udk a&;rdvsufpm;sqpfaew,f? 'kucy"
Anonymous October 18, 2007 10:59 PM
good tae byar ta gae par
Anonymous October 20, 2007 9:27 AM
မှန်တယ်ဗျာ...။ နံပါတ်(၂) နေရာမှာ နံပါတ်(၄) လို့ ရွေးပေးလိုက်တယ်ဗျာ
သူများမဟုတ်တဲ့ ... ငါ November 28, 2007 3:05 PM
သေပါပြီ ... အဟင့်သူများက ၁၅၀၀ တောင်သူများကိုပြောရမှာ
ကယ်ကြပါဦးဗျို့  ... ငိုချင်တာပဲသိတယ်
Unknown December 30, 2007 4:10 PM
taw par pay tal byar
very right for me
d htet po write chin tay tal
but English font ma hoat pae
japan font tway so dot ma phat
tat loedloat par pae
Anonymous January 27, 2008 1:20 PM
1.79....what to do with this?
3.(my wife name) ...correct
5.(father in law name).....wrong
6.(mother in law name)....wrong
7.Tin Zar Wint Kyaw....100% correct
8.Myaw Lint Chin Lay.....correct.
9.Late Pyar.....don't know what to say
10.Kha Na Lay Myar....correct
11.Jipsy Moe Tein....correct
mhatmhatyayalay February 08, 2008 2:49 PM
di bay din game lay ko tha baw kya tal.taw taw myar myar mhan tal.ku mha pae kyaw chit tae thu ko thi lite ya top mal. kyay zuu thin per tal. no(2) nay yar mhar (9) lo yay kha tal.su taung twe pyae mhar lar?
di post lay ko kyanaw blog mhar thin kwin puu per.
koarkar February 28, 2008 6:04 PM
San May Khin March 04, 2008 8:37 AM
I wrote No.2 as 7
Anonymous May 07, 2008 1:43 PM
my post= 10
Unknown May 22, 2008 9:57 AM
Tat ku kyan ka' tal Ko Nyein Chan yay (1)ka ko eain daung kya yin ya ma' baby ayay atwet lot htet haw ya mhar
Anonymous June 17, 2008 1:32 AM
အို့ အို ...........................
ဒီပို့ စ်လေး အနော့် ဘလောခ့်မှာတင်ပါစေ။
Anonymous June 17, 2008 11:48 PM
နံပါတ် (၂) နေရာမှာ ၆ လို့ရေးပါတယ်။ မှန်တယ်ဗျာ။
Anonymous August 03, 2008 1:16 PM
no2. i wrote 4
အောငျမြိုးဟနျ October 21, 2008 2:26 AM
နံပါတ်၂ မှာ ၄ လို့ရေးတယ်ဗျ။ တော်တော်မှန်တယ်ဗျာ
Anonymous October 23, 2008 9:26 AM
ဟုတ်ကဲ့ သမီးလည်း ကူးပီး ဖော်ပြမယ်နော်
Anonymous December 30, 2008 7:43 AM
Anonymous January 06, 2009 10:41 AM
ဗေဒင်လေးက မှန်တယ်နော်။ အရမ်း ကြိုက်သွားပြီ...
Anonymous February 04, 2009 9:45 AM